Kedu ka m ga-esi kwụsị Taskeng EXE na-agba ọsọ? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Taskeng.exe elu cpu - ihe ngwọta bara uru
Taskeng.exe elu cpu - ihe ngwọta bara uru
Kedu ka m ga-esi kwụsị Taskeng EXE na-agba ọsọ?
Iji mezue usoro a, soro usoro ndị a:
Right pịa bọtịnụ mmalite, wee pịa Search.
Pịnye msconfig na nyocha mmanya wee pịa Tinye.
Họrọ Ọrụ wee pịa igbe dị n'akụkụ Zoo ọrụ Microsoft niile, wee pịaGbanyụọha niile.
Gaa na ngalaba mmalite wee pịa Mepee Task Manager.
msi touchpad mmegharị ahụ
Ugbu a, were ụlọ mmanya Snickers n'ihi na ọ na-ewe nkeji iri na ise. Ozugbo emere ya, ikwesiri ịmalitegharị kọmpụta gị. Ọ bụrụ na edozibeghị nsogbu ahụ, gbalịa na-agba ọsọ DISM.
uzo nyocha abuo
Mgbe ahụ enwere ihe m kpọrọ nhọrọ nuklia. Naanị iwepụ wee tinyegharịa sọftụwia ahụ ma dabere na ntọala gị, nke a nwere ike ịbụ nhọrọ ka mma maka oge na isi ọwụwa. Ọ bụ naanị ihe ị ga - ekpebi dị ka nke kwesịrị oge na mbọ anyị, M, na - agabakarị nuklia.
Kedu ka m ga esi edozi njehie Taskeng exe?
Pịa Mmemme na Akụkụ, wee chọtataskeng.jee-nkekọrịta mmemme n'okpuru ndepụta. Pịa na otu n'ime ndị ahụtaskeng.jeemmemme wee pịa Uninstall button na elu menu rịbọn. Ugbu a, a ga-ewepụ ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, rụnyeghachi ihe omume ahụ ma malitegharịa kọmputa, ị ga-ahụtaskeng.ihiehie exearahụ.
Gini mere Svchost EXE ji agba oke?
N’ọnọdụ ndị ọzọ, ndịUgba.jee(netsvcs)eluNsogbu CPU ma ọ bụ ebe nchekwa nwere ike ibute site na Windows Update, ma ọ bụ site na faịlụ ndekọ Omume zuru ezu ma ọ bụ mmemme ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-amalite ọtụtụ usoro n'oge ha na-egbu ha.
Denye aha ugbu a maka akụkọ ndị ọzọ dịka ma denye aha na ọwa m
Ebee ka Taskeng.exe dị na Windows 10?
Faịlụ a na-adịkarị na folda C: Windows System32 ị nwere ike ịchọta faịlụ a na Windows sistemụ arụmọrụ Windows dịka Windows 10, 8, 7 na XP. Taskeng.exe bụ Task Scheduler ọrụ yana ọ bụ ọrụ maka ịdebe ihe aga-eme setịpụrụ ka ọ rụọ n'oge onye ọrụ ahụ kara aka, yana ịkpọku ọrụ ndị a mgbe ọ dị mkpa.
Gịnị mere taskeng.exe ji na-apụta na kọmputa m?
Ihe mbụ taskeng.exe bụ faịlụ sistemụ dị mkpa, nke na - eme ka ọ bụrụ ihe dị elu maka malware. Ọ bụ ọrụ ya maka ịdebe ọrụ ndị edobere na-aga n'oge a kara aka na ịkpọku ha mgbe ọ dị mkpa. Ọtụtụ ndị ọrụ ekwuola na windo Taskeng.exe na-apụta oge ọ bụla.
Esi ewepu taskeng.exe si Task Scheduler?
Soro usoro dị n'okpuru iji gbanyụọ OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration na OfficeBackgroundTaskHandlerLogon si Task Scheduler: Pịa igodo Windows + R iji mepe windo Gbaa. Pịnye “taskchd.msc” na kụrụ Tinye imeghe Task scheduler. N’ekpe aka ekpe, pịa akanri na Task Scheduler Library, gbasaa Ele ma mee ka Gosi Uzo zoro ezo.
Kedu ihe kpatara windo taskend.exe efu?
Ọtụtụ ndị ọrụ ekwuola na windo Taskeng.exe na-apụta oge ọ bụla. Dabere na ọnọdụ, ndị ọrụ mgbe ụfọdụ ga-ahụ windo Taskend.exe efu ma ọ bụ ozi dị mkpirikpi na-agwa na enweghị ike ịchọta ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ.